२०१९ बिश्वकप ट्रफी नेपाल ल्याइने, कहाँ राखिनेछ ? के गर्न पाईन्छ ? – WicketNepal
२०१९ बिश्वकप ट्रफी नेपाल ल्याइने, कहाँ राखिनेछ ? के गर्न पाईन्छ ?
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ भाद्र ९, शनिबार १९:४३
आगामी ३० मेदेखि १४ जुलाईसम्म इंग्ल्याण्डमा आयोजना हुने सन् २०१९ एक दिवसीय विश्वकपको ट्रफी नेपाल ल्याइने भएको छ। हरेक संस्करण अघि बिजेताले पाउने ट्रफीलाई बिभिन्न देश र स्थानमा लगिने चलन अनुरुप् यस संस्करणको ट्रफीलाई इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल समेत ल्याइने भएको हो।
क्रिकेट वर्ल्ड-कप ट्रफी टुर नाम दिइएको यस चलन अगष्ट २७ २०१८ बाट दुबईबाट सुरु हुनेछ। सो ट्रफीलाई ५ महादेशको २१ देशका ६० बढी शहरमा लगिने छ। यसअघि कुनै पनि क्रिकेट विश्वकपको ट्रफीलाई यति धेरै स्थानमा लागिएको थिएन। विश्वभरका क्रिकेट समर्थकहरुलाई विश्वकपको नजिक पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसीसी)ले यो कदम लिएको बताएको छ।
The @Nissan #CWCTrophyTour is set to begin its journey from the @ICC headquarters in Dubai on 27 August 2018! ?
➡️ https://t.co/W4v4UMqKnm pic.twitter.com/VgbZQpR3Ph
९ महिना लामो ट्रफी यात्राको दौरान विश्वकपमा सहभागी नभएका देशहरु नेपाल, संयुक राज्य अमेरिका र जर्मनीमा यस ट्रफीलाई प्रदर्शन गरिने छ। २०१९ को एकदिवसीय बिश्वकपमा १० टोलि सहभागी हुनेछन् जसमा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, भारत, पाकिस्तान, इंग्ल्याण्ड, वेस्ट इन्डिज, बंगलादेश, श्रीलंका , अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रीका रहेको छ।
कहिले र कसरी आउंछ नेपालमा ट्रफी ?
विश्वकप क्रिकेट ट्रफी यात्रा संयुक्त अरब एमिरेट्सको दुबईबाट सुरुभएपछि सर्वप्रथम ओमान पुग्नेछ। ओमानबाट ट्रफीलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इन्डीज हुँदै एसिया भित्र्याइने छ। एसियामा सुरुवातमा ट्रफीलाई श्रीलंका लगिनेछ। त्यसपश्चात पाकिस्तान र बंगलादेश हुँदै ट्रफी २७-२९ अक्टोबरमा नेपाल आइपुग्नेछ। ट्रफी नेपालको काठमाण्डौ स्थित दरबार क्षेत्रमा राखिने आइसीसीले जनाएको छ।
नेपालबाट सो ट्रफीलाई भारत लगिनेछ। त्यसपश्चात भने ट्रफीलाई न्युजील्याण्ड, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, केन्या, रवान्डा, नाइजेरिया, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड र जर्मनीहुँदै इंग्ल्याण्ड पुर्याइने आइसीसीले आफ्नो आधिकारीक वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा सन् २०१३ मा फुटबल विश्वकपको ट्रफी ल्याईएको थियो जसलाई तत्कालिन रास्ट्रपति रामबरण यादबले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।